Kooxda Real Madrid oo u Soo Baxday Wareega 16-ka ee Copa Del Rey “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Real Madrid oo u Soo Baxday Wareega 16-ka ee Copa Del Rey “SAWIRRO”
Kooxda Real Madrid ayaa u soo baxday wareega 16-ka ee koobka Copa Del Rey ka dib markii ay garoonkeeda Santiago Bernabéu 5-0 uga badisay kooxda UD Cornella oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka Spain.
Kooxda Real Madrid ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay sedax gool,waxaana labo ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan James Rodriguez,halka goolka sedaxaad uu dhaliyay ciyaaryahan Isco,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku laabtay qeybtii afaraad ayaa waxaa kooxda Real Madrid goolka afaraad u dhaliyay ciyaaryahan Javier Hernandez.
Ciyaaryahan Jese Rodriguez oo ka soo laabtay dhaawac uu mudo ku maqnaa ayaa goolka shanaad u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Kooxda Real Madrid ayaa isku celcelis ahaan wareega 16-ka ee koobka Copa Del Rey ugu soo baxday 9-1.
Kooxaha Manchester United,West Ham,Swansea,Liverpool iyo Aston Villa oo Guulo Gaaray “SAWIRRO”